Dilkii Darawalka WFP, Wuxuu Ahaa Dil ku Talo Gal ah – Rasaasa News
Dilkii Darawalka WFP, Wuxuu Ahaa Dil ku Talo Gal ah
May 22, 2011 ay degaanka ka dagaalami jirtay., ay ku sheegtay in aan la garanaynin cida dilka ka dambaysay, ayaa ka hadashay dilkaas iyada oo aad uga xun, Dilkii Darawalka WFP, Hayda WFP, in ONLF, laakiin carabka ku dhufatay, waxayna ka soo saartay qoraal cambaarayn, Wuxuu Ahaa Dil ku Talo Gal ah
Kooxda Jwxo-shiil, ee budhcada ah, ayaa codkeeda kor u qaaday markii ugu horaysay muddo laba sano ah, ka dib kolkii ay bishan May 13kii gaadmo qorshaysan ku dishay darawal u shaqaynayey WFP. Dilkaas oo ay kooxdu ugu talo gashay in ay kor ugu qaado magaceeda meesha ka baxay.
Kooxda Jwxo-shiil, kolkii uu dilku dhacay ee uu saxaafada soo galay, isla markii waxay soo saartay qoraal aan waxba ka jirin oo ay ku cambaaraynayso dilka.
Hayda WFP, ayaa ka hadashay dilkaas iyada oo aad uga xun, waxayna ka soo saartay qoraal cambaarayn, ay ku sheegtay in aan la garanaynin cida dilka ka dambaysay, laakiin carabka ku dhufatay, in ONLF, ay degaanka ka dagaalami jirtay.
Wasiiro ka tirsan dawlada Ethiopia, ayaa yeeshagay in dilkaas ay ka dambaysay ONLF. Hadalkaas dawladu way ku dhacday, in ay ka turjunto siyaasada dhabta ee gabalka. Sababtoo ah, ONLF, dawladu heshiis bay la gashay haduuna heshiisku been ahayn.
Waxaa dilka darawalka WFP, aad buun buuniyey mucaaradka Ethiopia, oo iyagu jecel in waxyeela kasta oo ka dhacda gabalka Ogaden ay kula dagaalamaan xukuumada ka jirta dalka Ethiopia.
Madaxweynaha Degaanka ayaa isna ku hadlay hadal la mid ah, midka wasiirada Ethiopia, isaga oo libin siiyey kooxda Jwxo-shiil, isaga oo yidhi “shaqaalaha WFP, waxaa dishay ONLF.” Waxaa yaab leh marka uu madaxweynuhu hadalkaas lahaa waxaa joogay magaalada Jijiga, gudoomiye xigeenka 1aad ee ururka ONLF iyo saraakiil ONLF, oo hore nabad u qaatay.
Waxaa wax laga naxo ah in WFP, ay samaysay sidii ay bucadu jeclayd, waxayna joojisay hawlihii qaybinta raashinka abaaraha ee ay ka waday dhulka Somalida Ogadeeniya.
Waxaa yaab leh in dalka Sudan, todobaad ka hor lagu dilay sarkaal sare oo WFP, u shaynayey. WFP, hawlihii ay ka waday gabalka lagu dilay ruuxa shaqaalaha, wali way ka wadaa hawlihii. Waxaa isweydiin leh maxay go,aanka deg dega ah uga gaadhay degaanka Somalida?
kooxda Jwxo-shiil, laba maamood ka dib waxay soo saartay qoraal kale oo ay ku fidisay Internetka, oo ay ku sheegtay in ciidamada Ethiopia ay aargoosi ku dileen boqol ruux oo degaanka dilku ka dhacay deganaa.
Arintaas oo ay mar labaad saxaafada internetku daftay, kana dhigtay dhab. Kooxda Jwxo-shiil, oo dhabtii ahaantii uu jiritaankeedu yahay internetka iyo afka baarkiisa, ayaa laba gool ka dhalisay dawlada Ethiopia iyo dawlada degaanka Somalida.
Sida la sheegayna waxaa dilkaas fuliyey rag la beel ah Jwxo-shiil, oo Jijiga laga abaabulay, ka dib kolkii uu Jwxo-shiil, u diray lacag ay ku fuliyaan falkaas xun.
Kooxda budhcada ah ee Jwxo-shiil, ayaan wax dhadhaqaaq ah ku lahayn degaanka Somalida Ethiopia.
Arintan dhacdayna cid kasta oo xumo doon ah ayaa fulin karta, danta uu ka lahaana waxay ahayd in mar saxaafadu qorto ONLF, xumo iyo wanaag kay doonto ha noqotee.
Dhibaato waxay haysataa dadweynaha abaaraysan ee ku nool degaanka Somalida Ethiopia, oo ay cid waliba ka faa,iidaysanayso sida; axmaarada mucaaradka ah, kooxda Jwxo-shiil, iyo waliba hayadaha managadnimada u jooga gabalka.
Waxaase isweydiin leh haday WFP joojiso shaqada, xagay joogaan dadka ay raashinka siin jirtay?
Danjiraha Ethiopia, u Joogi Doona Somaliya oo Lagu Soo Dhaweyey Muqdisho